Ahoana ny fanadiovana ny loto tanimanga - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana ny fanadiovana ny loto tanimanga
Ahitsio: Denny　2019-12-12　Mobile
Fomba fanodinana mahazatra ho an'ny gorodona gorodona:
1. Ho fanadiovana takelaka seramika isan'andro, dia afaka mampiasa manasa, savony sns.
2. Mampiasà sabera hanampiana amoniana kely sy fangaro turpentine hanadio ny boaty mba hamiratra azy ireo kokoa.
3. Ny tendron-jiro vita amin'ny posy dia tokony hasiana tsy tapaka, mandritra ny 2-3 volana.
4. Raha misy tsentsina amin'ny tampon-biriky dia azonao atao ny mampihatra menaka am-bava eo am-pandavoana sy manala azy amin'ny lamba maina hanamboarana azy.
5. Ny elanelana misy eo anelanelan'ny biriky sy ny biriky dia azo diovina tsindraindray miaraka amin'ny vinaingitra decontamination, ary avy eo dia misy takelaka fanaovana rano miantona azo ampiharina amin'ny hantsana hisorohana ny fambolena bobongolo.
6, dite, kafe, labiera, gilasy, sakamalaho sy loto hafa no mampiasa vahaolana sodium hydroxide na potassium bikarbonate solution.
7, ranomainty, simenitra ary ny loto hafa dia mampiasa vahaolana dilute toy ny asidra hydrochloric, asidra nitrika.
8. Mampiasà fanadiovana manokana ho an'ny hoso-doko, takelaka ary loto.
9. Ireo marika tavela taorian'ny fandoroana ny matchsticks sy taratasy dia azo ampiasaina miaraka amina otrikaina asidra oxalic dilovina miaraka amin'ny borosy nify.
Ahoana ny fanadiovana ny loto tanimanga Ny atiny mifandraika